Daawo:- Sidee ayuu u dhacay dil Nin hubeysan uu u geystay Dad isku qoys ah? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Daawo:- Sidee ayuu u dhacay dil Nin hubeysan uu u geystay Dad...
Dhacdadaan oo aad looga naxay ayaa waxaa ay ka dhacay deegaanka Tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka Muqdisho,kaidb markii Nin hubeysan uu weeraray qoys ka mid ahaa dadka deegaanka.
Ninka oo wararka qaar ay sheegayaan in uu ka tirsan yahay Booliska Soomaaliya ayaa ku hubeysnaa qoriga AK47,waxaana rasaas uu qoyska ku furay ku geeriyooday Afar Ruux halka Shan Ruux ay ku dhaawacmeen.
Qof kamid ah dadka ku nool degaanka Tabeelaha Sheekh Ibraahim goobjogna u ahaa dhacdadaan ayaa Risaala uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen.
Previous articleKulamo gaar gaar ah oo ka socda Magaalada Dhuusamareeb
Next articleKiisas hor leh oo Coronavirus ah oo laga helay Magaalada Cadaado